Батони 1.101 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.101 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား စားစရာ & ေသာက္စရာ Батони
Батони ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Благодаря мобильному приложению “Батони” вы сможете быстро и просто оформить и оплатить предзаказ, самовывоз или доставку блюд грузинской кухни в Москве.
Меню «Батони» - «грузинское избранное». Специи и особые ингредиенты доставляются непосредственно из Грузии, а рецептура и традиции приготовления соблюдаются очень строго. Главное ударение – на сохранение аутентичной рецептуры и классические способы приготовления блюд.
Как сделать заказ в приложении “Батони”: выберите понравившиеся позиции из меню, добавьте их в корзину и перейдите на экран оформления заказа (по нажатию на иконку корзины).
Укажите время, когда хотите прийти за своим заказом или выберите доставку с указанием адреса и времени доставки.
မိုဘိုင်း Application "Batoni" ရန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူစီစဉ်ခြင်းနှင့်မော်စကိုတွင်ဂျြောဂြီယနျအစားအစာ၏ကြိုတင်မှာယူမှု, ပစ်ကပ်သို့မဟုတ်ပေးပို့များအတွက်ပေးဆောင်နိုင်ပါ။
Menu ကို "Batoni" - "ဂျော်ဂျီယာရဲ့အကြိုက်ဆုံး။ " နံ့သာနှင့်အထူးပါဝင်ပစ္စည်းများဂျော်ဂျီယာနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများမှတိုက်ရိုက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏နှင့်ချက်ပြုတ်အစဉ်အလာအလွန်တင်းကြပ်စွာလေ့လာကြသည်။ အဓိကအလေးပေး - စစ်မှန်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ချက်ပြုတ်၏ဂန္ထဝင်နည်းစနစ်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေါ်မှာ။
menu ထဲကသင်အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏လှည်းမှသူတို့ကိုထည့်ပါနှင့် (အမှိုက်ပုံး icon ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်) မျက်နှာပြင် Checkout မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်: သင်၏လျှောက်လွှာကို "Batoni" အောင်လုပ်နည်း။
အမိန့်တွင်, သင့်အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပထမဦးဆုံးအမိန့်မှ add: အမည်, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံရဖို့။
ငွေသား, ဘဏ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဆက်သား: တစ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းရွေးချယ်ပါ။ ငွေပေးချေမှုလက်ခံပါနှင့် "အမိန့်" button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အားလုံးသင့်ရဲ့အမိန့်အော်ပရေတာကိုသွားပါလိမ့်မယ်, နှင့်ချိန်းချက်သောအချိန်မှာ, ကျနော်တို့ကပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။
Батони အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Батони အား အခ်က္ျပပါ
sowa စတိုး 1.42k 425.58k
Батони ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Батони အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.101
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://batoni.1.doubleb-automation-production.appspot.com/docs/licence_agreement.html
App Name: Батони
Release date: 2019-08-14 07:22:45
လက်မှတ် SHA1: A4:CE:AA:BC:B2:BC:8A:C5:7C:18:6B:CF:A2:26:B7:D7:F2:66:74:0E
အဖွဲ့အစည်း (O): Ru-Beacon
Батони APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ